यस्तो दु:खदका साथ अमेरिकामा दुई नेपालीको निधन !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/यस्तो दु:खदका साथ अमेरिकामा दुई नेपालीको निधन !!
अमेरिका- अमेरिकाको न्यूयोर्कमा दुई नेपालीकोनिधन भएको छ। मुस्ताङ घर भई न्युयोर्कको क्वीन्समा बस्ने सोनाम लामा र ज्याक्सन हाइट बस्ने थोंग्वेन विष्टको निधन भएको स्थानीय मिङमार लामाले जानकारी बताए। नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।सोनाम अन्दाजी ४० बर्षका रहेका थिए। उनको आफ्नै कोठा भित्रै निधन भएको जनाइएको छ।
ज्याक्सन हाईटमा एक्लै बस्दै आएका उनी केही दिनदेखि बिरामी भएर घरमा आरम गरिरहेका थिए। फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क नभएपछि उनी बसेको स्थानमा गएर हेर्दा उनी मृ-त अवस्थामा भेटिएका बताइएको छ। उनको निधन कोरोना संक्रमणकै कारण भएको अनुमान गरिएपनि रिपोर्ट आउन भने बाँकी रहेको छ।
एजेन्सी । न्युयोर्कमा कर्मचारीलाई निशुल्क कोरोना भाइरस परीक्षण तथा तलबसहित बिदा दिइने भएको छ । अमेरिकी राज्य न्युयोर्कमा कर्मचारीलाई तलबी बिदा दिनेबारे राहत प्याकेजमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरिसकेको बताइएको छ ।प्याकेजमा कोरोना प्रभावित अमेरिकन कर्मचारीलाई ३ महिनासम्म तलबी विदा र निःशुल्क कोरोना परीक्षण एवं उपचार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस बाहेक कर्मचारी परिवार सदस्यको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था आए थप तीन महिना तलबी विदा पाइने छ ।न्युयोर्कमा हालसम्म २ हजार ३८२ जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनकाअनुसार बिहीबारसम्म अमेरिकामा ५ हजार ३५८ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। ७५ जनाले ज्या’न गुमाएका छन्।
कोरोना महा मारीलाई लिएर विश्व स्वा`स्थ्य संग`ठनले चीन विरुद्ध उठायो यस्तो कडा कदम